Ajjeechaa Waraanni EPRDF Namoota Meesha-maleeyyii Irratti Raaw’achaa Jiru Cimsinee Balaaleffanna ! – Adda Bilisummaa Oromoo
(Ibsa ABO—Mudde 29, 2018)
Addi Bilisummaa Oromoo ajjeechaa suukkanneessaa namoota nagaa (meesha-maleeyyii) irratti loltoota EPRDFiin gaggeeffamaa jiru kana jabeessee balaaleffata. Tarkaanfiin bineensummaa akkasii kun callisaan ilaalamuu kan hin qabnee fi nagaa-jaallattoota hundaanis balaaleffatamuu kan qabu jennee amanna. Sirni Cunqursaa fi Abbaa Irrummaan (Afaan qawweetiin Ummata bulchuun) kana booda akka hin danda’amne Paartii EPRDFtti agarsiisuuf wareegama lubbuu fi qabeenyaa herreguuf hin salphannetu itti baafame. Paartiin EPRDFs waggoota 27 booda (dirqisiifameetis tahu) dhugaa kana amanee akka fudhatee fi keessa isaatti jijjiirama/haaromsa akka godhe bsee, cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamuuf humnoota siyaasaa biyyattii hunda wajjin nagaadhaan hojjechuuf erga waadaa seenee bubbulee jira. Haa tahu malee, hojiidhaan kan lafa irratti mul’achaa jiru EPRDF umrii aangoo isaa dheereffachuuf daandiima Abbaa-irrummaa kan waggoota 27 dabran hordofaa ture sanatti cichee jiraachuu isaa ti.
EPRDF caasaa humna waraanaa keessatti haaromsa (reform) gaggeesseen jira jedhee afaaniin dubbata. Haa tahu malee, waraanni EPRDF kan maqaa “Raayyaa Ittisa Biyyaa” jedhuun gurmaawe har’as kaayyoo Siyaasaa EPRDF tiksuuf kan dhaabbate tahuu isaa malee aantummaa Ummataa horachuu isaa mallattoon agarsiisu homtuu hin jiru. Waraanni kun har’as namoota ilaalcha siyaasaa kan EPRDF irraa adda tahe qaban akka diinaatti ilaaluu itti fufee jira. Kanaaf ragaa kan tahu, Oromiyaa keessaa bakkoota gahe hundatti Alaabaa Oromoo/ABO dabalatee mallattoolee ABO ibsan gara garaa balleessuu fi namoota waan akkasii harkatti arge miidhaa irraan geessisuu fi shoorarkeessaa jiraachuu isaa ti.
Adeemsi balaafamaan EPRDF kun faallaa waadaa inni dirree siyaasaa bal’isuuf fi mirgoota dimokiraasii lammiilee biyyattii hundaaf kabajuuf seenee ti. Kun ammoo ifa abdii jijjiiramaa amma mul’ate kana kan deebisee dukkaneessuu fi Oromiyaa, Itoophiyaa fi naannoo isheettis balaa lolaa guddaa kan harkisu waa taheef EPRDF hatattamaan akka irraa dhaabbatu ABOn jabeessee gaafata. Yoo EPRDF didee haaluma jalqabe kanaan kan itti fufu tahe balaa kanaan wal qabatee gahuu malu hundaaf kan itti gaafatamu isuma/EPRDF tahuu ABOn hubachiisa.
Mudde 29, 2018